CoffeeCoin စျေး - အွန်လိုင်း CFC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CoffeeCoin (CFC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CoffeeCoin (CFC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CoffeeCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CoffeeCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CoffeeCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CoffeeCoinCFC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000709CoffeeCoinCFC သို့ ယူရိုEUR€0.000597CoffeeCoinCFC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00054CoffeeCoinCFC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000645CoffeeCoinCFC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00636CoffeeCoinCFC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00445CoffeeCoinCFC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0157CoffeeCoinCFC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00264CoffeeCoinCFC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000944CoffeeCoinCFC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000981CoffeeCoinCFC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0159CoffeeCoinCFC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00549CoffeeCoinCFC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00378CoffeeCoinCFC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0531CoffeeCoinCFC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.12CoffeeCoinCFC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000971CoffeeCoinCFC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00106CoffeeCoinCFC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.022CoffeeCoinCFC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00493CoffeeCoinCFC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0749CoffeeCoinCFC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.84CoffeeCoinCFC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.269CoffeeCoinCFC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0519CoffeeCoinCFC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0196
CoffeeCoinCFC သို့ BitcoinBTC0.00000006 CoffeeCoinCFC သို့ EthereumETH0.000002 CoffeeCoinCFC သို့ LitecoinLTC0.00001 CoffeeCoinCFC သို့ DigitalCashDASH0.000007 CoffeeCoinCFC သို့ MoneroXMR0.000008 CoffeeCoinCFC သို့ NxtNXT0.0513 CoffeeCoinCFC သို့ Ethereum ClassicETC0.0001 CoffeeCoinCFC သို့ DogecoinDOGE0.198 CoffeeCoinCFC သို့ ZCashZEC0.000007 CoffeeCoinCFC သို့ BitsharesBTS0.0273 CoffeeCoinCFC သို့ DigiByteDGB0.0258 CoffeeCoinCFC သို့ RippleXRP0.00233 CoffeeCoinCFC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00002 CoffeeCoinCFC သို့ PeerCoinPPC0.00248 CoffeeCoinCFC သို့ CraigsCoinCRAIG0.316 CoffeeCoinCFC သို့ BitstakeXBS0.0296 CoffeeCoinCFC သို့ PayCoinXPY0.0121 CoffeeCoinCFC သို့ ProsperCoinPRC0.087 CoffeeCoinCFC သို့ YbCoinYBC0.0000004 CoffeeCoinCFC သို့ DarkKushDANK0.222 CoffeeCoinCFC သို့ GiveCoinGIVE1.5 CoffeeCoinCFC သို့ KoboCoinKOBO0.156 CoffeeCoinCFC သို့ DarkTokenDT0.000653 CoffeeCoinCFC သို့ CETUS CoinCETI2